Izinhlobo Ezingu-10 Zamatilasi Ezingakusiza Ukukunikeza Ubuthongo Obumnandi Busuku - Okunye
Izinhlobo Ezingu-10 Zamatilasi Ezingakusiza Ukukunikeza Ubuthongo Obumnandi Busuku
10 Types Mattresses That Can Help Give You Good Nights Sleep
Ukulala kahle kungenye yezinto ezibambe iqhaza elikhulu empilweni enhle. Ukuntuleka kwayo kungathinta amazinga akho e-hormone, imizwa nesisindo, izinhlobo eziningi zocwaningo zikhombise kaninginingi. Yize kungakumangaza, izinhlobo zikamatilasi olele kuzo zingadlala indima enkulu emjikelezweni wakho wokulala. Kodwa-ke, ukuthenga okusha kungaba ngumsebenzi omkhulu kwabaningi. Namuhla, kunezinhlobo eziningi zomatilasi ezitholakala emakethe ukuthi ukuthola okulingana nezidingo zakho kudinga ucwaningo oluningi. Futhi unikezwe umaki obizayo abawuphethe, kunjalo okungcono ukuhamba ngokuba nolwazi oluphelele ngendaba ukugwema ukuzisola.
Ngokufunda lokhu, uphokophele endaweni efanele njengoba sesizothela itiye kuzo zonke izinhlobo zomatilasi. Ngale ndlela, hhayi nje kuphela ukuthi ungagwema imikhonyovu yabathengisi abazama ukukuthengisela omunye womatilasi ababiza kakhulu lapho, kodwa futhi uthole lowo okuvumela ukuba ulale njengengane. Nakhu konke odinga ukukwazi.
Izinhlobo Ezi-10 Zomatilasi Abaphelele
1. Omatilasi beMemori Foam
ezimbili. Gel kumatilasi
3. Omatilasi beLatex:
Isine. Omatilasi basekuqaleni
5. Omatilasi bakaHybrid
6. Omqamelo Abaphezulu Omatilasi
7. Omatilasi abaningi be-Foam
8. Umbhede Womoya
9. UMatrasi Wamathambo
10. Imibhede yamanzi
ishumi nanye. Imibuzo evame ukubuzwa Ngezinhlobo Zamatilasi
1. Omatilasi be-Memory Foam
Njengoba igama liphakamisa, lomatilasi ubizwa ngokuthi yi-memory foam ngoba ubumba uzungeze umzimba wakho bese uphendula ekushiseni nasekucindezelweni bese ubuyela emuva kancane lapho ingcindezi isusiwe. Lokhu kwakusungulwe yi-NASA ngonyaka we-1966. Ngaleso sikhathi, inhloso yayo kwakungukuthuthukisa ukuphepha kwamakhushini ezindiza. Manje isetshenziselwa kabanzi izinhloso zokuhweba.
Namuhla, lo matilasi uyathandwa kabanzi ngenxa yomuzwa wokuthi udala ukucwila embhedeni ngokoqobo. Ubumnene obengeziwe futhi buyiphuzu lokuwina njengoba futhi kunikeza ukukhululeka kumalunga akho abuhlungu, njengoba kubikwe yiWebMD. Eqinisweni, omatilasi abanamagwebu enkumbulo bangasiza abantu abane Ubuhlungu beqolo ulale kangcono , ngokweNational Sleep Foundation.
Ithiphu yepro: Phakathi kwazo zonke izinhlobo zomatilasi, omatilasi abanamagwebu enkumbulo banikela ukwesekwa okuhle ngenkathi belele futhi banconyelwa abalele eceleni. Inzuzo eyengeziwe yukuthi iyamelana nezibungu zothuli. Kodwa-ke, kumunca ukushisa okuningi, okungaba yi-break-breaker uma uhlala ezindaweni ezinesimo sezulu esifudumele.
2. UGel kumatilasi
Omatilasi abafakwe i-gel baqala ukwenziwa ngonyaka we-2006, kodwa awuzange uthole ukuthandwa kwaze kwaba ngu-2011. I-‘Generation Generation Mattress ’iyinhlanganisela yejeli negwebu lememori. Kuyaziwa kabanzi futhi kuyathandwa ngaphezu kwegwebu lememori njengoba lixazulula isikhalazo esisodwa wonke umuntu anaso kumatilasi amagwebu enkumbulo, ukushisa.
Umatilasi wama-foam foam ubamba ukushisa ngenxa yobuningi bawo obuvimbela ukuhamba komoya, ngokweSleep.org. Ijeli, nokho, aluvumeli umatilasi ukuthi ubambe ukushisa, ngaleyo ndlela kugcinwe izinga lokushisa elipholile likamatilasi.
Ithiphu yepro: Omatilasi beGel bayinto enhle ongayikhetha uma ufuna okuthile okuzokuvumela ukuthi uhlale upholile ubusuku bonke, ukubuyela emuva ngokushesha kusuka ekubunjweni komzimba wakho, ngenkathi unikeza nokusekelwa okwanele ngenkathi ulele.
Uma ungumuntu ofuna ukubhekelela imvelo, ungajabula ukwazi ukuthi umatilasi we-latex wenziwe ngezinto zemvelo. Futhi bajabulela isisekelo esikhulu samakhasimende ngenxa yemvelo yabo ethokomele futhi eqinile. Njengegwebu lememori, nazo zinikeza leyo mizwa 'yokucwila' futhi ziyashesha ukubuyela emuva. Omatilasi laba benziwa nge-latex, ekhishwa esitshalweni senjoloba. Awekho amakhemikhali amaningi asetshenziswayo ekwenziweni kwawo, okwenza futhi kube okubolayo.
Ithiphu yepro: Njengoba kushiwo ngaphambili, omatilasi be-latex baphelele uma ufuna umkhiqizo ozinzile ozokuhlala isikhathi eside futhi ungakudikibalalisi ngokunethezeka.
4. Omatilasi basekuqaleni
Omatilasi be-Innerpring bebelokhu bemakethe kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-1900, okubenza babe ngezinhlobo ezithengiswa kakhulu. Lezi zenziwe ngamakhoyili wensimbi acindezelayo lapho kusetshenziswa isisindo. Lawa makhoyili ensimbi ahlinzeka ukwesekwa kwangaphakathi kumatilasi, inani eliningi lamakhoyili lisho uhlelo lokusekela olungcono kakhulu nangaphezulu ikhwalithi yokulala . Lawa makhoyili angahlelwa ngezindlela ezimbili, axhunyiwe futhi ngawodwana. Khetha inketho ngayinye yasentwasahlobo, uma uhlanganyela umbhede othile. Uqinisekile ukuthi uvuka njalo lapho zihamba uma uthola entwasahlobo exhunyiwe. Okunye ukubuyela emuva futhi yimisindo ehewulayo iziphethu eziyenzayo eminyakeni edlule.
Ithiphu yepro: Lezi matilasi ziyindlela enhle uma ungumfundi noma uqasha isikhashana. Ziyindlela enhle kubantu abangashadile abangenayo imali eningi kakhulu abangayisebenzisa kumatilasi. Iqinile futhi ibaluleke kakhulu, itholakala kalula yonke indawo.
5. Omatilasi Abangahlanganisiwe
Omatilasi beHybrid yiyona ndlela ekhethwa kakhulu njengoba ihlanganisa okuhle komhlaba womabili. Omatilasi beHybrid njengoba igama liphakamisa inhlanganisela yamatilasi angaphakathi kwe-infern ne-latex noma i-foam foam. Imvamisa ukwakheka kwangaphakathi kwala matilasi kuhlanganisa amakhoyili wensimbi, ngawodwana noma axhumene nobumnene begwebu lememori noma okokusebenza kwe-latex okunganikeza ukuqhuma okusheshayo kanye nokuthamba nokuqina ndawonye. Omatilasi beHybrid baphelele isibonelo somuzwa owenziwe ngezifiso. Kuyinto yokuhlanganiswa kwazo zonke izinto ezinhle.
Ithiphu yepro: Umatilasi waseHybrid unikeza izici ze-antivicrobial ze-latex, ukuqhuma kwe-foam foam kanye nokuqina kwamakhoyili. Yize ube mncane ohlangothini lomkhiqizi, lokhu kuyindlela enhle njengoba inikeza induduzo enkulu futhi izokuhlala isikhathi eside.
6. Omatilasi Abaphezulu Bomcamelo
Omatilasi abaphezulu bomcamelo baziwa futhi ngokuthi omatilasi i-'Euro-top '. Lolu hlobo lukamatilasi lunongqimba lwamapayipi alugqinsi olungamasentimitha ambalwa. Kuhlanganiswe nesizukulwane sangaphakathi, umatilasi ophezulu womcamelo unikeza induduzo ngenani lezikebhe abazinikezayo. Ngokuya ngohlobo lwezinto ozikhethelayo esicongweni sakho somcamelo, ungathola izinzuzo ezisukela ekupholiseni kuya ekubhampeni, ukuqina nokunethezeka okwengeziwe. Ungakhetha izinto ezizokwenziwa ngokotini, ifilimu ye-fiber, igwebu lememori, igwebu, i-latex noboya.
Ithiphu yepro: Omatilasi abaphezulu bomcamelo kungenzeka ukuthi yilona hlobo lomatilasi ababiza kakhulu emakethe. Kepha bahlonishwa ngemali njengoba kungengokuthi bangakunika izinzuzo zabo bonke omatilasi kuphela, banezindawo zokupholisa, banikeze ukuqina futhi bayagezeka.
7. Omatilasi Abanezifo Eziningi
Omatilasi abaningi bePoly Foam noma bePolyurethane Foam uhlobo olubiza kakhulu lukamatilasi wamagwebu atholakala emakethe. I-Polyfoam ngokuyinhloko itholakala kuma-petrochemicals futhi abakhiqizi abaningi baziwa ukuthi basebenzisa i-polyfoam kusendlalelo esiphezulu sikamatilasi wasentwasahlobo. Lokhu akubangelwa ukuthi okokusebenza kusekhwalithi enhle kepha kungenxa yokuthi kuyindlela eshibhile.
Lokhu kungenxa yokuthi i-polyfoam ayinabuningi ngakho-ke umatilasi kulula ukuwucindezela nokuthumela. Inkinga enkulu lapha ukuthi lokhu kuminyaniswa kunciphisa isikhathi somatilasi isikhathi esiningi. Ungayigwema le nkinga ngokukhetha i-Poly Foam enikeza ukuminyana okuphezulu. Kodwa-ke, kufanele kuqashelwe ukuthi i-high-density polyfoam izokwehlisa isithunzi ngokushesha okukhulu.
Ithiphu yepro: Ngenkathi inezinkinga ezithile, omatilasi bePoly Foam baziwa ukusiza ukuthuthukisa ukuma kwakho nokusiza ekuqondaniseni umgogodla. Kungokwemvelo okungajwayelekile futhi kukwenza kube phakathi kwezinketho ze-hypoallergenic laphaya. Inzuzo eyengeziwe yukuthi ilula kakhulu ephaketheni.
Uma ucabanga ukuthi sikhuluma ngaleyo mibhede yomoya eqonde ngqo esihogweni esiyisebenzise sonke ekolishi, khona-ke ngeke ube nephutha kakhulu. Ngenkathi labomatilasi besazodinga ukuthi usebenzise ipompo yomoya, bavame ukucashunwa ngendwangu yegwebu enikeza induduzo enkulu. Uma ungumuntu ongathandi ukuhlala endaweni eyodwa isikhathi eside futhi usafuna ukuba nombhede ongazibiza owakho, nansi inketho yakho. Labo kini abanezivakashi eziningi ezijwayele ukuhamba nabo bangakhetha lokhu.
Ithiphu yepro: Lona wodwa kumatilasi okuvumela ukuthi unqume izinga lokuqina ngokunikeza ipompo esandleni sakho ngokoqobo. Lokhu kungasiza kubantu abanezinkinga emuva. Igcina ipholile futhi iyaphatheka njengesihogo.
Omatilasi bama-Orthopedic yisisombululo esiphelele ezinkingeni zomhlane womuntu. Njengoba igama liphakamisa, omatilasi bamathambo babekhethwe ngokukhethekile ukuxazulula izinhlungu emuva nezinye izinkinga zomgogodla. Yenzelwe ukunikela ngokulala okuqinile. Lo matilasi unikeza ukwesekwa emhlane nokukhululeka ezinhlungwini ezihlangene. Lo matilasi waqale waklanywa futhi wakhiqizwa ngawo-1950. Lezi matilasi zingasiza futhi ukulungisa ukuma emuva.
Ithiphu yepro: Uma ubhekene nezinkinga zangemuva ezisukela ebuhlungwini obungapheli ukuze ushelele idiski, udokotela angakuncoma ukuthi ushintshele kulo matilasi. Iqinile ngokweqile futhi isabalalisa isisindo sakho ngokulinganayo ukukuvimbela ekuphoseni nasekujuleni ubusuku bonke.
Imibhede yamanzi mhlawumbe yizinhlobo ezindala zomatilasi ezikhona. Zasungulwa ekuqaleni kwawo-1800 ukuhlinzeka usizo ezigulini ezinesifo sokulala. Le mibhede ihambisana nomzimba wakho futhi inikeze ukukhululeka kuwo wonke amaphuzu okucindezela. Kwakha ukuzwa kokuntanta kumagagasi okungakhululeka ngokwedlulele.
Ithiphu yepro: Imibhede yamanzi nayo inenzuzo eyengeziwe yokukunikeza ukunethezeka kokuba nombhede oshisayo futhi ibuye ibekwe njenge-hypoallergenic. Kodwa-ke, ihlinzeka ukwesekwa komgogodla okumpofu futhi inamathuba amaningi okuvuza ngesikhathi esincane.
Imibuzo evame ukubuzwa Ngezinhlobo Zamatilasi
U. Ungawukhetha kanjani umatilasi ophelele?
TO. Ukuzihlomisa ngolwazi ngokwenza ucwaningo olunzima kuhlale kukuhlanganisa. Yenza uhlu lwezinkinga onazo ngomsamo wakho okhona bese udlulela kokukhethwa kukho bese ukhetha uhlu lukamatilasi olulungele wena. Zihlole ezitolo bese uya kumikhiqizo eyahlukene ukuthola umbono wentengo esukela. Bese ukhetha umatilasi ongagcini ngokufeza izidingo zakho kodwa futhi ongena kusabelomali sakho. Awusoze wakhetha kakhulu lapho ukhetha umatilasi.
U. Yimuphi umatilasi omuhle kakhulu wokusiza izinhlungu ezihlangene nezasemuva?
TO. Omatilasi abahamba phambili abangakusiza uthole ukukhululeka kobuhlungu yiMemory Foam, iLatex, iGel, umatilasi wama-Orthopedic neHybrid. Ngokuya ngesabelomali sakho nezinye izidingo, khetha phakathi kwalezi zinketho ezinhlanu.
Funda futhi: Izinhlobo Ezi-5 Zomatilasi Ukuze Uzazi
isisu sokuzivocavoca ukulahla amafutha esiswini
amakhambi asekhaya amahle kakhulu okukhula kwezinwele
izivivinyo ezinciphisa amafutha esiswini
ukususwa kwezinwele ngamakhambi abesifazane asekhaya
amathiphu okuzenzela wesikhumba esikhanyayo ngokushesha
izindlela zokulawula ukuwa kwezinwele